1. Canjeero runtii waa wax aad u fudud in la sameeyo. Kaliya dhowr maado Oo uma baahna qalab gaar ah sida Buuq ama foorno sidoo kale Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa hal digsi dhaldhalaal ah ayaa kugu filan. Maanta waxaan haynaa wado lagu sameeyo canjeelada. Si fudud keligaa ayaa iskaga tagi kara. Waxaad ku tijaabin kartaa tan guriga.
2. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin canjeelada 1. Bur burka 2. Sonkorta (oo lagu taliyo inay sonkor bunni tahay) 3. Budada dubista 4. Subag ama saliid 5. Budada Vanilla 6. Ukunta 7. Caano saafi ah 8. Maqaar loo baahan yahay sida shukulaatada, miro macaanka, malab, buskud, miro daray ah, iwm.
3. Isku qas waxyaabaha ugu muhiimsan, oo ay ku jiraan bur qamadi, 2-3 ladlan, 1 ukun, 2-3 qaado oo caano cusub ah, sonkor, iyadoo kuxiran macaanka la doonayo. Markaa dadku ha isku dhex qasaan. Haddii aadan haysan garaacis, taasi waa fiicantahay. Waxaa loo isticmaali karaa sidii shaashad alwaax ah halkii
4. Marka xigta, ku dar qaar ka mid ah maaddooyinkaas, haddii la heli karo: xirmo budada ah oo vanilj ah oo loogu talagalay dhadhan yar iyo caraf udgoon, iyo in yar oo budada dubista ah, qiyaastii nus shaaha ah, oo keliya ku filan in la fududeeyo canjeelada. Laakiin taxaddar oo ha ku darin budada wax lagu dubo oo badan, maxaa yeelay tani waxay ka dhigeysaa canjeelada inay buuxsamaan.
5. Daar gaaska, dhig digsiga dabka hoose. Kudar ilaa 1 qaado yar oo saliid ah ama subag kuna fidi subagga ladle ilaa digsiga dhan.
6. Markii subagga la dhalaaliyo, isticmaal ladle ama ladle si aad uga soo qaadatid beedka canjeelada ah ee aan diyaarinay kuna shub digsiga qaab wareeg ah mar haddii ay 3-4 qaybood ka heli doonaan isku darka burka hore loo diyaariyey, waa inay soo baxaan ilaa 6. -8 gogo ', diyaar u ah inay u adeegto qiyaastii 2
7. Marka dhinaca kale si sax ah loo kariyo, waxaad u rogi kartaa dhinaca kale. Ka taxaddar inaadan isticmaalin dab aad u xoog badan. Iskuna day inaad digsiga dhigto Dabka wuxuu si siman ugu diraa digsiga digsiga. Canjeelada ayaa la kariyey isla waqtigaas.
8. Saxan saar oo ku qurxin dusha sare ee aad rabto, ha ahaato shukulaatada, macaanka miro, malab, buskud, miro daray ah, iwm. Nooca subaggu waa isku mid macaan!
9. Sidee tahay? Habka loo sameeyo canjeelada ayaa aad uga fudud sidii la filayay, sax? Hadda, uma baahnid inaad heshiisiiso makhaayadda maxaa yeelay Waan samayn karaa naftayda. Waad ku dari kartaa dushooda inta aad rabto. Sii isku day, adiguna waad jillaabi doontaa. Bilowgu wuu yara yaraan karaa, laakiin haddii aad isku daydo inaad ku celceliso marar badan Xaqiiqdii wuxuu noqon doonaa mid sifiican u hadla Ilaa hal maalin waxaad ogaan doontaa cuntada sida aad u jeceshahay ee aad rabto Waa maxay waxyaabaha iyo inta la dhigayo Yaree macaan sida aad jeceshahay. Faa'iidooyinka canjeelada ma fududa oo kaliya in la sameeyo. Weli ku raaxeyso dhadhan cusub Iyada oo toppings sidoo kale Waxyaabaha aan ugu jecel nahay waa Muuska iyo Nutella, markaa maxaad isku dayeysaa maxaadse jeceshahay inaad sida ugu badan u cunto canjeelada?